Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Sierra Leone » Ugu yaraan 99 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka Sierra Leone
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Wararka Sierra Leone • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ugu yaraan 99 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay dalka Sierra Leone.
Qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay doonayeen in ay shidaal ka qaataan ka dib shil ka dhacay wadada.
Qarax gaari booyad ah oo sababay khasaare nafeed oo aad u badan ayaa ka dhacay magaalada Freetown ee caasimadda dalka Sierra Leone.
Qaraxa ayaa dhacay barqanimadii maanta oo Sabti ah kadib markii booyada ay ku dhacday gaari kale.
Waxaa jira 30 qof oo si xun u gubtay isbitaalka kuwaas oo aan la filayn inay sii noolaadan.
Sida laga soo xigtay saraakiisha xarunta meydadka ee Sierra LeoneCaasimada dalka, in ka badan 90 qof ayaa ku dhintay qarax booyad shidaal oo saaka ka dhacay magaalada Freetown.
Qarax gaari booyad ah oo ka dhacay Freetown ayaa sababay khasaare nafeed oo aad u badan, iyadoo 100 qof laga cabsi qabo inay ku dhinteen.
Qaraxan ayaa dhacay barqanimadii maanta oo Sabti ah kadib markii booyada shidaalka ay ku dhufatay gaari kale, waxaana halkaasi isugu soo baxay dad uruurinayey shidaal soo daatay.
"Dadka deegaanka ee isku dayay in ay ururiyaan shidaalka ka soo daadanaya baabuurka ayaa dhibanayaal u ahaa qaraxii xigay," Duqa magaalada Freetown Yvonne Aki-Sawyerr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku soo qoray, balse markii dambe wuu tirtiray qaybtan.
Sheegashada ah in dadku ay shidaal guranayaan ayaa waxaa muujinaya dad aad u faraxsan oo taagan hareeraha booyada, qaarkoodna ay wataan caagadaha, taasoo la sheegay in la qaaday wax yar ka hor inta uusan qaraxa dhicin.
Saraakiisha Freetown ayaa ku waramaya in qolka meydadka ee magaalada uu soo gaaray 91 meyd ka dib qaraxa ilaa hadda. Madaxa ee Wakaaladda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (NDMA) ayaa sheegay in ay ahayd "shil aad u xun oo aad u xun."
Saacado ka dib shilkan ayaa waxaa isa soo tarayay tirada dhimashada ee ay mas’uuliyiintu sheegeen. Madaxweyne ku xigeenka Maxamed Juldeh Jalloh ayaa sheegay in ugu yaraan 92 qof la dilay ka dib markii ay booqdeen laba isbitaal oo la dhigay dhibanayaal.
Cusbooneysiin dambe ayaa dib u eegis ku sameeyay 95. Wasiir ku xigeenka caafimaadka ayaa markii dambe sheegay in dhimashadu ay marayso 99.
Sida laga soo xigtay xubin ka tirsan shaqaalaha Isbitaalka Connaught, waxaa jiray 30 dhibanayaal ah oo si xun u gubtay kuwaas oo aan la fileynin inay sii noolaadaan.
Mudane Danjire Junisa Precious Gbeteh Sallu Kallon – GGA waxa uu ku biirayaa midnimada boqolaalka ruux ee ku waayay qaraxii PMB Wellington ee dhanka bari ee Caasimada aan jeclahay – Freetown, Sierra Leone.
Faallo ka timid Sierra Leone
Waa #Jimco madow Junisa Precious Gbeteh Sallu Kallon, shaqsi ahaan sida Junisa Precious Sallu Kallon ay ogaatay khasaaraha hantiyeed iyo nolosha saaxiibo dhow iyo qaraabo fog oo ka mid ah daraasiin ay ku naf waayeen qaraxa booyad 40ft ah oo shidaal ah.
Waa maalin xushmad leh iyo sabti iyo axad oo ay tahay in ay cabsi galiso taariikhdeena Freetonian ahaan weligeed. Sida aan ka bartay Golaha Magaalada Freetown waxaan ku dhaawacnay 92 (48 ku sugan Connaught Hospital, 6 Choithrams Hospital, 20 at 34 Military Hospital, 18 at Emergency Hospital); Waxaan ku weynay 94 nafood oo dheeraad ah Connaught Mortuary; ilaa 4 qof oo meyd ah ayaa wali yaala goobtii uu qaraxa ka dhacay.
Junisa Precious Sallu Kallon waxa ay doonaysaa in ay u mahadceliso jawaabta degdega ah ee Booliska Magaalada Caasimada ah iyo ku xigeenka Duqa Magaalada iyo Golaha Magaalada Freetown, dhamaan Xukuumada Sierra Leone gaar ahaan Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka - Sierra Leone (NDMA), oo hogaaminaysa jawaabta.
Alain St. Ange, oo madax ka ah guddiga dalxiiska Afrika ayaa soo saaray bayaan uu ku yiri: "Waxaan tacsi tiiraanyo leh u direynaa dadka iyo dowladda Sierra Leone masiibadan qaran."